कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउँदै चिकित्सक
कास्की । प्रथम चरणको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउँदै गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक एवं गण्डकी प्रदेश कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम कार्यक्रमका प्रवक्ता डा विनोदविन्दु शर्मा । तस्बिर : राधिका कँडेल
विर्तामोडमा कोरोनाविरुद्धको पहिलाे खोप डा राठीलाई
लावण्ढ स्कीन हेल्थ केयर सेन्टरका डा. हेमन्त राठीले खोप लगाएर पहिलो चरणको अभियान शुरु गर्नुभएको हो ।
‘जन्मदिनमा वृक्षरोपण अभियान’ को पहिलो स्थापना दिवस मनाइयाे
अभियन्ता सेढाईँले 'जन्मदिनमा वृक्षराेपण अभियान' कार्यक्रम विगत तीन वर्षदेखि अनवरत सञ्चालन गरिरहनुभएकाे छ ।
‘म नै बनाउँछु मेरो लागि अस्पताल’ अभियान शुरू
काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिकामा ‘म नै बनाउँछु, मेरो लागि अस्पताल’ भन्ने अभियान शुरु भएको छ । नगरभित्र बसोबास गर्ने विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील युवाले सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अस्पताल बनाउने परिकल्पनाका साथ अभियान
लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान : प्रभावकारी भएनन् कार्यक्रम (भिडियोसहित)
रुपा घिमिरे काठमाडौं । नेपालमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान जारी छ । अभियान अवधिभर सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म ऐक्यबद्धता जनाउँदै विभिन्न कार्यक्रम गरिएका छन् तर हिंसाका घटना न्युनीकरण र वास्तविक
अभियानलाई स्थानीय, संघ संस्था, समूह, स्वस्थ्यकर्मी, महिला स्वयंसेविका सबैले साथ दिई रहेका छन् ।
नवलपुरमा तपाईँको मास्क खोई ? अभियान शुरु
समुदायस्तरमा कोरोना फैलिन थालेपछि यसको नियन्त्रण गर्न भन्दै नवलपुरको देवचुली नगर क्षेत्रमा सचेतना अभियान शुरु भएको छ ।
चोकचोकमा सचेतनामुलक बोर्ड राख्न थालिएको कुश्मा नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले बताउनुभयो ।
ललितपुरमा उर्जा वचत अभियान शुरु
ललितपुर । दक्षिण ललितपुर ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्था लिमिटेडले आफ्ना उपभोक्ता र शेयर सदस्यका लागि उर्जा वचत अभियान शुरु गरेको छ । सरकारी संस्थाले विद्युत महसुल भुक्तानीमा सहजीकरणका लागि उर्जा